Maalinta: Diseembar 7, 2018
Xogta Degmadda ee Degmada Alanya, 5 216 Km Road Wuu Furan Yahay Sanadka
Degmada Alanya waxay sii wadaa inay dhisto wadooyin cusub dhamaan Alanya. 5 ee xaafadaha bartamaha iyo miyigaba leh shaqada waddo-goynta ayaa ah degmadu, taas oo horseedda cusub [More ...]
Karakoyun Viaduct iyo Iskuduwaha Iskuduwaha Shaqada ayaa sii socota
Duqa Magaalada Sanliurfa Nihat Ciftci, Karakoyun Viaduct iyo Köprülü Junction ayaa sameeyay baaritaanno. Duqa magaalada theiftçi wuxuu sheegay in howlaha ay ku socdaan si heer ah qorshaha, Duqa magaalada Çiftçi ayaa yiri, iz Waxaan nahay kuwa raacaya mashruucyadeena. Ha joogsan, wadada sii wad, ”ayuu yidhi .Şanlıurfa Dawlada Hoose. [More ...]
Duqa Magaalada Gaziantep Fatma Sahin, mashruuca Gaziray-Metro ee kanaalka telefishanka gaarka loo leeyahay ayaa u sheegay shaqada inay nool tahay. Duqa Magaalada Caalin wuxuu xasuusiyay in shaqooyinka Gaziray-Metro mashruucan ay ka bilaabmeen 2017. [More ...]
RayHaber 07.12.2018 Warbixinta Shirka
Adeegga Ijaarka Gawaarida ayaa laga qaadi doonaa Wadada Gawaarida u dhaxeysa Antakya iyo Habib-i Neccar Mountain (dib loo dhigay Taariikhda 28.12.2018)
Kooxaha Barafka ayaa sugaya in ay sii joogaan Kocaeli!
Kooxaha Kocaeli ee Magaalada Barakeysan ee Barafka ah waxay sugaan qaaradaha inay jidadka u furnaadaan oo ay u baabi'iyaan dhibaatooyinka inta lagu jiro barafka. Shaqaalaha 550 iyo 225 [More ...]
Young maray sannadihii hore ee Republic of Turkey in weerarka warshadaha iyo ururada soo saarta. Warshadda Duulista Hawada ee Kayseri, oo ah midda ugu muhiimsan maalgashiyadan, waxay soo saartay diyaaradda 1950 illaa 130. Dagaal cusub [More ...]
Cankesen Marshandiz Booqday Shaqaalaha YHT Warehouse
Can Cankesen, Maareeyaha Guud ee Sarkaalka Gaadiidka-Sen, Ümit Aydın Kuxigeenka Guud ee Maareeyaha Guud wuxuu booqday shaqaalaha shirkadda Warehouse. Gudoomiyaha Cankesen iyo wefdigiisa ayaa isugu yimid kulanka ay la qaateen shaqaalaha YHT. [More ...]
Tababarka Hoggaanka-Tabarka ee EGO wuxuu sii socdaa
Tababbarka shaqada waxaa sii wadaya Agaasimaha Guud ee EGO si loo kordhiyo dhiirigelinta shaqaalaha ee qaybta adeegga shirkadaha, si loo siiyo adeeg tayo wanaagsan muwaadiniinta iyo kor loogu qaado kartida shaqaalaha marka loo eego baaxadda shaqadooda. Ankara [More ...]
Farriin ka timid Wasiirka Turhan ee Maalinta Duulimaadka Duulaanka Rayidka ah
Civil Aviation Organization Caalamiga ah, taas oo Turkey waa xubin ka aasaasay maalin (ICAO) Oogidda 7 December ah, sano 26 tan iyo adduunka oo dhan ayaa u dabaal Maalinta Civil Aviation. Shaqada Hawada Duulista Rayidka ah ee Turkiga [More ...]
Kulanka Halista ah ka hor IZBAN Weerarka
Izmir, 10December Isniinta shaqaalaha IZBAN ee qorsheynaya inay ku baxaan maalmaha tirinta shaqo joojinta, halka Ankara, Duqa magaalada Aziz Kocaoglu uu la kulmay Agaasinka Guud ee TCDD. 10 ee Izmir markay ahayd Isniinta Diseembar [More ...]
Tareen, Tram iyo Basaska ee Luxembourg hadda
Go'aanka cusub ee Luxembourg, oo ah dalka ugu yar Yurub, wuxuu qofkasta ka dhigayaa masayr. Sida ku cad qorshayaasha isbahaysiga ee uu hogaaminayo Raiisul wasaare Xavier Bettel, tigidhada tareenka, taraamyada iyo basaska waa laga saari doonaa xagaaga soo socda. codsiga [More ...]
Rugta Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Sare ee La talinta Sare ee 2018 / 2. Kulanku wuxuu qabsoomay 4: 2018 on 19 Diseembar 00 Tuesday. Gudoomiyaha Gudiga TOBB Memaban Aziz [More ...]
Ku dhow degmada Çorlu ee Tekirdağ, 8 waxaa lagu dilay shil tareen bishii Luulyo, dadka 25 waa la dilay, dadka 340 waa ay dhaawacmeen, masiibada ayaa dhowaan dhacday, muuqaalka sawirka kaamarada ayaa soo muuqday. 4 bil ka badan dhacdada [More ...]
Adeegyada Gaadiidka Dadweynaha waxay bilaabeen Xarunta Saklikent Ski Center
Dowladda hoose ee Antalya waxay bilaabaysaa inay adeegyada gaadiidka dadweynaha siiso Sakl tokent Ski Center oo kamid ah xarumaha dalxiiska jiilaalka ee Antalya. Qorsheynta Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalaweynta Antalya iyo Waaxda Nidaamka Tareenka, si loo fududeeyo marin u helka Saklıkent [More ...]